China Wall Mirror mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
Isipikha seWallpaper, Ezisusiweyo ze-Acrylic Mirror Izitikha ze-DIY Wall Decor Mirror engekho Isipili seglasi se Ekhaya Igumbi lokulala elihonjisiweyo
Uyilo lwesipili esihle sokuhombisa ikhaya lakho okanye iofisi yakho iya kunika igumbi lakho ukubukeka okuhlaziyayo, lenze imeko enomdla kwaye inike umbono omangalisayo ngaphakathi kwakho.
UDhua udonga lwesipiliIsincamathelisi sesincamathelisi senziwe ngeplastikhi ye-acrylic, umphezulu uyabonakalisa kwaye umva uneglu ngokwawo; Kukho ifilimu ekhuselayo kumphezulu wesipili ukunqanda isipili ukuba singakhuhleki, akusekho zixhobo zifunekayo ekumiseni.
Olu hombiso ludonga lwe-acrylic alunetyhefu, alunabisi, ukhuseleko lwendalo kunye nokulwa nokubola. Kucacile kwaye kuyabonakalisa njengesipili seklasi, kodwa akubukhali kwaye kubuthathaka ngaphandle kokonakalisa.
Isixhobo: Iplastiki, i-acrylic
Umbala: Isilivere, igolide okanye imibala engaphezulu yesipili
Ubukhulu: Ubungakanani obuninzi okanye ubungakanani besiko
Imilo: Hexagon, isangqa esingqukuva, i-ect yentliziyo. iimilo ezahlukeneyo okanye zesiko
Isicelo: Indawo egudileyo kunye necocekileyo kubandakanya iglasi, iileyili zeceramic, iplastiki, isinyithi, ukhuni kunye nepeyinti yelatex
Kufuneka ucime ifilimu yokukhusela, iya kubonisa umphumo ocacileyo wesipili
Kufuneka unamathele kumphezulu ogudileyo
Material Izinto eziphezulu zoMgangatho】: Ezi udonga lwesipiliIsincamathelisi esenziwe ngesitikha senziwe nge-acrylic, engasindi kwaye yomelele. Umphezulu uyabonakalisa kwaye umva uneglu ngokwawo; Umphezulu unefilimu ekhuselayo kuyo, ukuze ube nokuziva ngcono kunye nezibuko ezicacileyo. Ngaphambi kokuncamathisela nceda ucoce udonga, nceda uyikhuphe kwaye uncamathisele imveliso kwindawo ethe tyaba xa uyisebenzisa.
UbungakananiUmbala kunye neMilo】Isipili se-Acrylic sinokuyila ngokulula nakweyiphi na imilo oyifunayo, iza ngemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu
Umsebenzi】: Uyilo lwesipili oluhombisayo lwenza ukuba ikhaya lakho libonakale lahlukile, linomtsalane ngakumbi; Indawo ebonakalayo inokwenza igumbi lakho likhanye. Izinto ze-DIY zikulethela ulonwabo, ukusebenza nabantwana bakho, ukunceda umntwana wakho ukuba akhulele ubukrelekrele ..
Ukususwa kunye nokuchasana nokukrwela: I isibuko sodongaIsitikha sokuhombisa kunokuba lula ukunamathisela kwaye sisuswe ngaphandle kokulimaza eludongeni lwakho. kukho ifilimu ekhuselayo kumphezulu wesipili ukuthintela isibuko ukuba singakrwitshwi, nceda usicime ngexesha lokusetyenziswa, isipili siyakucaca. Nceda uqaphele ukuba isipili esinefilimu ekhuselayo sifiphele
Kulula ukuyifaka】: I izitikha zesipili sodongainokulungiswa ngokulula ngasemva kwayo kwaye isuswe ngaphandle kokonakalisa udonga lwakho. Akukho zixhobo zifunekayo ekumiseni. Thatha nje umva wefilimu kwaye unamathele kumphezulu ogudileyo owukhethileyo, njengeethayile, iindonga, iingcango, iifestile kunye nekhabhathi. Emva koko cima ifilimu yokukhusela engaphambili.
Ikhuselekile kwaye ayinamanzi Water: Isibuko sodonga esenziwe nge-DIY senziwe nge-acrylic, kwaye le nto ayiyityhefu, ukhuselo lokusingqongileyo, alunabisi, luchasene nokubola. Izitikha zesipili zicacile kwaye ziyabonakalisa njengesipili seklasi, kodwa hayi ezibukhali kwaye ezibuthathaka ngaphandle kokonakalisa. Yonwaba kwaye wonwabele indawo ekhuselekileyo ngelixa ulungelelanisa izibuko zakho zesipili kunye nabantwana bakho abancinci kunye nabantwana abaphantsi kolawulo lwakho ngaphandle kokukhathazeka malunga nokwenzakala okanye iingozi. Ukhuselekile kunesipili esidala!
【Ukusetyenziswa okubanziThis: Olu setyisi wesipili esine-acrylic esenziwe ngokugqibeleleyo yenzelwe imisebenzi yakho ye-DIY. Izitikha zesipili zinokusetyenziswa nakweyiphi na indawo egudileyo necocekileyo enjengeendonga, iingcango, iifestile, ikhabhathi, njalo njalo, isuti yegumbi lokuhlala, igumbi lokudlala labantwana, igumbi lokutyela, ikhitshi, indawo yokwenza umthambo, iofisi yasekhaya, ipaseji, udonga olungasemva lweTV, isofa udonga lwangasemva, iveranda yangemuva yegumbi lokulala kunye nezinye iimveliso zokuhombisa eludongeni, yifake ukwenza indawo icace ngakumbi kwaye ikhanye ngakumbi.
INYATHELO 1: Nceda ucoce umphezulu apho ufuna ukufaka khona izitikha.
QAPHELA: Ukuba udonga alucacanga, iziteki ziya kuwa zingaphelanga iiyure ezingama-24.
INYATHELO 2: Susa iphepha lokukhusela elingasemva, emva koko ulibeke eludongeni okanye kwenye indawo.
INYATHELO 3: Kukho ifilimu yokukhusela ngaphambili. Cima ifilimu ekhuselayo kwii-stcikers kwaye ucoce umphezulu ngobunono.
Asisibuko, ayinakusetyenziswa njengesipili sokubuyisela njengoko ezi ziziphumo nje. Kukho ifilimu ekhuselayo esetyenziselwa ukukhusela umphezulu. Nceda uyihlube ngaphambi kokuyisebenzisa.
I-Q1: Ngaba i-Donghua ngumenzi we-OEM ngqo?
A: Ewe, ngokuqinisekileyo! I-Donghua ngumvelisi we-OEM kwimveliso yesipili esinezibuko kwimveliso ukusukela ngo-2000.
I-Q2: Loluphi ulwazi oluza kufuneka ndilunike amaxabiso?
A: Ukunikezela ngexabiso elichanekileyo, sinethemba lokuba abathengi banokusazisa ngezixhobo, ubungakanani njengobukhulu, ubungakanani, kunye nokuncamathela okanye akunjalo, mingaphi imibala yokuprinta, iinkcukacha zonxibelelwano, ubungakanani obufunekayo, ubungakanani kunye neMilo eneefayile zobugcisa.
Umbuzo. Yintoni imiqathango yakho yentlawulo?
A: T / T, Alibaba Assurance Trade etc. 30% idipozithi, 70% phambi kokuba zithunyelwe. Iifoto okanye ividiyo yemveliso yobunzima iya kuthunyelwa ngaphambi kokuthunyelwa.
Q4: Athini amagama akho okuhambisa?
A: I-EXW, i-FOB, i-CFR, i-CIF, i-DDU, iDDP.
Q5: njani malunga nexesha lakho lokuhambisa?
A: Ngokuqhelekileyo iintsuku ezi-5-15. Ngokwenani lakho.
Q6. Ndingazifumana njani iisampulu? Uthini umgaqo-nkqubo wakho wesampulu?
A: Siyavuya ukukunika inani elithile leesampulu zasimahla zesiqhelo ezineendleko zokuhambisa.
Isitika sesipili se-acrylic
isipili sodonga sokuhombisa
izitikha zodonga lwesipili
izibuko zokuhombisa udonga
izitikha zesipili sodonga
izibuko zodonga uhombiso lwasekhaya